AIZA NO ALEHA : Kianjan’ny kanto – Mahamasina -
AccueilVaovao SamihafaAIZA NO ALEHA : Kianjan’ny kanto – Mahamasina
06/04/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Hanotrona ny Rindra Tarika i Njakatiana
Tarika isan’ny zandriny nefa efa manana ny lazany. Ao anatin’ny fankalazan’izy ireo ny faha-2 taonany, hanolotra seho takariva etsy amin’ny kianjan’ny kanto Mahamasina anio alina manomboka amin’ny 9 ora ny Rindra Tarika, ka hanotrona azy ireo amin’izany i Njakatiana. Ity araka izany no isan’ny seho goavana ahitana ity tarika ity an-tsehatra, ka hitondrany ireo hira nahafantarana azy toa ny « Mitia mangina », « Tiako ianao », « Mamela ny helokay », « Ombay lalana »… Tsy zoviana fa efa kalaza amin’ny fanafanana seho ihany koa i Njakatiana, izay hitondra an-tsehatra indray ireo sangan’asany. Ankoatra ny hira milamindamina, dia manana ireo hira mampientanentana fanao amin’ny seho takariva toa izao ihany koa izy.
Hanasongadina ny feo mangany i Lalatiana
Manadalo an-tanindrazana indray, ary hihaona amin’ireo mpankafy. Hanasongadina ny feo mangany indray i Lalatiana amin’ny seho takariva atolony etsy amin’ny Piment Café Behoririka anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Seho natokany ho an’ny mpankafy eto an-drenivohitra taorian’ny fandraisany anjara tamin’ny Nosy Be Jazz Festival, sy ny tsy nahatanteraka ny seho tokony hatao tamin’ny taon-dasa. Fotoana indray io araka izany handrenesana ireo hira nahafantarana an’i Lalatiana raha tsy hitanisa afa-tsy ny « Nofy », « Avelao », « Oay », « An’iza ny masoandro »…
Hotel Ibis – Ankorondrano
Silvio Schneider no hanokatra ny « Festival de la guitare »
Miditra amin’ny andiany faha-5. Hanomboka anio alina etsy amin’ny hotel Ibis etsy Ankorondrano ny « Festival international de la guitare ». Ilay mpitendry avy any Allemagne Silvio Schneider no hanokatra ity hetsika ity, izay tsy hifarana raha-tsy ny 15 avrily izao. Toerana maro no hampiantrano ny hetsika iray samy hanana ny lohahevitra entiny toa ny « Flamenco », « Brassens », « Italienne »… Hampiavaka ity andiany ity ny fisian’ny « bal masqué » amin’ny lanonam-panokafana hotanterahina eny amin’ny CCI Ivato. Ankoatra ireo mpitendry vahiny nasaina, dia tsy diso anjara amin’ny fanehoana ny talentany amin’io hetsika io ihany koa ireo mpitendry Malagasy, ary handray anjara ireo mpitendry tanora voafantina tamin’ny fifaninanana natao.
Ny sabotsy lasa teo no nanararaotan-dRavalomanana indray ny pi-maso izay ataony amin’ny firenena Frantsay, manoloana ny efa filazany ny firotsahany hofidiana amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ny taona 2018. Efa fantatr’i Ravalomanana tsara mantsy ny ...Tohiny